Esi hazie ihe Ubuntu dika ihe ichoro | Site na Linux
Etu esi hazie onyonyo Ubuntu dika mkpa gi
Kit Nhazi Ubuntu (UCK) bụ ngwa ọrụ na - enyere onye ọrụ aka mepụta omenala Live CD / DVD de Ubuntu yanakwa ihe ndị ọzọ sitere na ya: Kubuntu, Xubuntu na Edubuntu.
Ọ bụ ezie na ọ na-enye ohere nghazi niile nke sistemụ ahụ, otu ebumnuche ya bụ ịkwado okike nke nsụgharị nke sistemụ arụmọrụ n'otu asụsụ ma ọ bụ karịa karịa ebe ọ bụ na ụdị ọrụ Ubuntu nwere ike ọ gaghị ebu ngwungwu asụsụ niile dị n'ihi nsogbu oghere.
Wụnye ya dị mfe. Naanị ịkwesịrị ibudata faịlụ .deb nke ga-etinye ngwa a dị ka ngwa ọrụ.
Mgbe emere ihe omume a, ọ ga-arịọ data iji mepụta CD Live ọhụrụ. A bụ ihe a video na-egosi gị a nzọụkwụ-site-nzọụkwụ ndu.
Nnọọ weebụsaịtị | UCK
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Etu esi hazie onyonyo Ubuntu dika mkpa gi
Ndewo, anyị bụ ndị otu ụmụ akwụkwọ ma anyị chọrọ ikewapụta Linux nke anyị site na Edubuntu jiri Ubuntu Customization Kit.
Anyị hụrụ ederede gị ma anyị hụrụ ya nke ukwuu.
Anyị enweghị oge ma ọ bụ ihe ọmụma iji mee ya yabụ na anyị na-achọ onye anyị ga-goro ma mee nkesa ahụ.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị, zitere anyị email gị na CV gị petrusrerum@gmail.com anyị na-enyekwa gị nkọwa ndị ọzọ.
Zaghachi Petrus Rerum
na na ị bụ eziokwu, ya bụ, ubuntu ssale si preconfigured ike Arch, Dragora, Gentoo na-eme ka ị na-eme ihe niile, na akpan akpan na Dragora eji a free kernel. Ma, enwere nnukwu nsogbu, ana m enye gị okwu m, n'agbanyeghị agbanyeghị mbọ m na-eji gentoo, abịara m ghọta na nchịkọta dị ole na ole, ha na-eme ka ịnwe ngwugwu ole na ole na-arụ ọrụ n'ezie. N'otu na debian enwere ngwugwu agbajiri agbaji ụfọdụ. Yabụ n'echiche m Ubuntu dị ezigbo mkpa karịa ka ọ dị n'ihi na ọ bụrụgodi na ụlọ ọrụ na-akwado ya, ọ na-ewe linux na sọftụwia na - akwụghị ụgwọ maka ụmụ mmadụ dị mfe na - achọghị ịma ihe ọ bụla gbasara mkpokọta, blobs wdg ... ọ bụghị maka Ubuntu Linux na ụwa ya ọ ga-adị iche.
Biko ka m chịa ọchị winbuntoso JAAAAAAAAAAAA JAAAAAAAAAAAA Winbuntu nke Windows anaghị akwụ ụgwọ karịa KISS distro dị ka Gentoo, Arch ma ọ bụ Slackware? Jeez, onye ọzọ kpuru ìsì site na Canoni $ oft haha, Winbuntu ọ na - ahapụ gị ka ị gbagoo sistemụ site na ncha dị ka KISS? MBA! Na KISS distros ị wụnye ihe ị chọrọ, ị gaghị enweta ọtụtụ mmemme na-abaghị uru dị ka ọkọlọtọ.
Ihe ichoro iguta Chineke ...
Amamihe gị na-eju m anya. Obi ike Senõr. Mana ana m agwa gị ka ị kwụsị site na ọrụ ọrụ Gentoo ma ọ bụ site na Gbakọọ ma ọ bụ ọbụna site na slackware.
Amaghị m ma ọ bụrụ na ha chọrọ Slackware, mana ebe m ma ndị mmepe gentoo nke ọma, a na m akpọku gị ka ị kwụsị ebe ahụ, ha ga-ekele gị nke ukwuu maka amamihe gị gbasara ịhazi ị na-enye ha aka na edemede gị na enyere aka ịchekwa ụdị omenala distro.
Ihe niile ị na-ekwu kpuru ìsì site na nke a ma ọ bụ na m gafere otu ugboro na ihe ị dere ya nwere ike ịhụ na ọ bụrụ na ị bụghị Canoni $ dị nro ị si n'akụkụ nke ọzọ amaghị m ihe. Naanị m maara na enweghị m akụkụ na Linux ozugbo m kwanyere obodo nweere onwe ya ugwu na obodo ya dị iche iche.
Ọ dị ezigbo mma na nkọwapụta nke ọ bụla Linux customization-anọgide na / wdg / skel ebe a bi isi ngalaba, ọ ga-eju gị anya. Banyere.
Portaro ihe ị na-ekwu banyere Gentoo bụ eziokwu na naanị ị ga-elele ọnụ ọgụgụ nke ndepụta echere maka mmelite ngwugwu. Ma obi ike na-ekwu ihe bụ eziokwu dịka ọmụmaatụ na Gentoo na Slack onye ọrụ aka na-akawanye ngwa ngwa na ọ bụ ya mere na enwere ike ịhazi ya karịa. Ma enwere nsogbu bụ na Ubuntu nwere ike ịhazi ya dị ka ndị a na-agbanwe na naanị Ubuntu bịara na nkọwapụta ndị akọwapụtaralarị na arụchaala karịa Gentoo dịka ọmụmaatụ, nke ahụ bụ nnukwu ihe dị iche yana ndị nhazi ntinye ngwugwu n'etiti Linux. Canonical bụ ụlọ ọrụ na-eme ihe dị mma iji weta ngwanrọ a na-etinye na ngwugwu ya na ụzọ bara uru maka ndị ọrụ nkịtị nke sistemụ kọmputa. Ọ dị m ka Obi ike na-agabiga ma ọ ghọtaghị ihe ọ bụla gbasara Linux naanị ị ga-agụ ya.
Ọ bụrụ na anyị agaa, ihe na-eme bụ na m na-emegide ụlọ ọrụ ndị dị na Linux, ha na-ekwu "Ana m eme ihe etinyere na ọnụ nke tonip na onye na-enweghị mmasị galik na mmiri", ụlọ ọrụ dịka Canoni $ oft, with their "Nke a abụghị ọchịchị onye kwuo uche ya ".
Ihe na-eme m bụ na afọ juru m na winbuntosos (ndị ọrụ Winbuntu na-emegide onwe ha).
Amaghi m ihe obula? Anọ m na-eji Linux ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 4, amalitere m na Winbuntu mgbe m dị mma, m wee gafee Debian, Fedora na Mandriva, ugbu a ana m eso Arch Linux. Adịghị m ọkachamara mana abughi m noob
Canoni $ oft anaghị eme ihe ọ bụla dị mma, ihe ọ na-eme bụ (Spain) echiche sitere na distros ndị ọzọ na mgbe ahụ blọọgụ Winbuntu na-ewetara ya dị ka nnukwu akwụkwọ nke narị afọ, mgbe ha bụ ihe etinyere na distros ndị ọzọ ogologo oge, otu ihe atụ ọ bụ Linux enyi na enyi (etinyere na Mandriva na Open Xange) ma ọ bụ Plymouth.
Ma ee e, ọ naghị eme m, ana m agwa ihe dị ka ha si dị, ihe na-eme bụ na abụ m onye na-atụ ụjọ ngwa ngwa, na ndị ọzọ na winbuntosos
Modul? Ndị mmụọ ọjọọ? Otu ndị ọrụ? Rc.conf? Na m ga-ahazi ihe niile na Arch Linux, nhazi abụghị naanị ịmara.
Enwere ike idozi ịdị n'otu? Ọbụghị ncha ncha
O di nwute, enwere uzo abuo ebe a, linuxeros na ubuntosos, ahapuru m ugbua ihe ndi di n'okpuru
Guysmụ okorobịa dị nfe ... onye ọ bụla n’ime unu ji ihe ọ chọrọ. Enwere ndị Ubuntu dị mma maka. Anaghị m ahụ nne nne m yi Arch.
Ihe ederede ahụ ị gwara m masịrị m, nke ahụ bụ nsogbu m nwere na Ubuntu, akpọrọ m ya, n'ihi na n'oge na-adịbeghị anya ọ nwere ọtụtụ njehie.
Ihe na-ewute m bụ na m na-atụle KISS ka ọ bụrụ ihe a na-ahụkarị n'ihi na ị na-arịgo ha dịka ịchọrọ, ndị ọzọ na-edozi ma na-erughị
Ọ bụ ihe na-atọ ụtọ, agbanyeghị na enweghị m ike ịgọnarị na ọrụ Suse Studio na-adọta uche m.
Zaghachi Francisco Ospina
Ndewo ọzọ, anyị agaghị anọ ebe a na-ese okwu, ọ dịghị mkpa. Mana echere m na Obi ike ga-adị mma ma ọ bụrụ na ị kpọọ m ihe dị ka winbuntu ma ọ bụ ihe ọ bụla, ị tụlere ihe m na-ekwu na ọ bụghị ihe m bụ na ihe kpatara m.
Ọfọn na azịza ọhụrụ a ị kwuola ihe m kwenyere, na-ahụ ụlọ ọrụ gburugburu Linux na oyi akwa anyị na-eme ihe dị mma n'ihi na ọ bụ otu anyị si dị ka ịhụ udele chọrọ ịbụ ugo. Yabụ ka ị tụkwasịrị m obi na ụlọ ọrụ ndị a, agbanyeghị na Fedora RedHat na-eme ụfọdụ ihe yiri Ubuntu maka ihe ha mere ka ihu akwụkwọ ha megharịa.
M na-akpọ gị òkù ka ị gụọ usoro Trojan na edemede nke ọ na-awakpo Ubuntu n'ụzọ ziri ezi n'ọtụtụ echiche
(Kpọọla m na tebụl a ma ọ bụ na tebụl ndọrọ ndọrọ ọchịchị maka itinye njikọ a, n'ihi na enweghị m otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị akọwapụtara)
Ọma ihe ọzọ m ji / eji
Dragora Linux Linux ị ga - ahazi ya site na elu ruo na ala ma jiri kernel efu,
Debian - Linux oria, Crunchbang, Aptosid, ndị ọzọ ...
Anọ m na-eji Linux ntakịrị ihe karịa gị, ọ bụ ezie na m na-etinyekarị aka na obodo dị iche iche, nsụgharị, forums, distros kemgbe m malitere iji ya.
Ọ bụrụ na m ga-ahọrọ Linux dị mfe ma na-aza ụbọchị ọ bụla onye ọrụ, m ga-agwa gị Ubuntu n'enweghị obi abụọ.
Ọ bụrụ na m ga-ahọrọ Linux nke ịhụnanya maka ihe ọmụma banyere sistemụ dum, m ga-agwa gị Gentoo.
Kedu ihe bụ nsogbu? nsogbu bụ na ọ dịkarịrị mfe ịghọta Ubuntu site na akwụkwọ na nkọwa zuru ezu nke dị banyere ya karịa akwụkwọ Gentoo, nke a bụkwa n'ihi ọnụọgụ ndị ọrụ na ndị nlekọta nke Gentoo na Ubuntu.
N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, ekwenyere m na ọ bụrụ na Ubuntu enweghị canonic n'azụ ya, ọ ga-abụ ihe na-atọ ụtọ karị ịghọta echiche ya nke ngwaahịa na-abụghị nke akụ na ụba yana ọ bụrụ na ọ bụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Mana ọ bụrụ na amalitere m iche ma ọ bụrụ na ọ nweghị Ubuntu a gaghị enwe ọtụtụ ndị ọrụ Linux, ọ bụghị naanị n'ihi na ọtụtụ distros anaghị eche banyere ngwanrọ na ngwugwu ma ha na-ahapụ n'ihi enweghị ndị mmepe na-enye yana Ubuntu ị hụrụ Ama ma ọ bụ na ọ dịghị ihe ọzọ ụfọdụ ọkụ na nke a na nsogbu equanto na ndị ọzọ ma ọ bụ na-eche banyere ya na ọ bụ ya mere na ha aghọ obere mgbanwe. N'agbanyeghị nke ahụ, ihe niile Linux na distros na atumatu bụ onwe ha, n'agbanyeghị obere ha dị ezigbo mkpa iji wulite ụwa ka mma.
Ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na e kere ihe dị ka nke a maka Arch, n'ihi na ntinye ọ bụ ezie na ọ dịghị njọ na mbụ nwere ike ịtụ ụjọ
SUse studio anaghị enye gị ohere idozi ngụkọta nke naanị distro na-eme ya bụ Ubuntu yana ụfọdụ mmezi nke Debian.
Amaghi m remasters, aga m ede ya! 🙂
m na uche remastersys ka mma, uck yiri m obere na-erughị ike nke miri impersonations dị ka plymouth management na show usoro.
Ọ bụ ezie na dị ka ndụmọdụ niile ị na-enye ebe a, ha dị ezigbo mma. Ana m agba onye ọ bụla ume ka o jiri ngwaọrụ ndị a mee ihe ma mepụta ihe nrụpụta ha karịa na mkpakọrịta ọha na eze dịka ndị ntorobịa na Akwụkwọ Nsọ, ị nwere ike ịnwe ọtụtụ ndị nrụghachi dị ka ihe atụ ma mee nke gị, dịka ọmụmaatụ m mepụtara Flavitu Linux. Mmakọ onye ọ bụla.
Mmelite Pack3 maka LMDE dị